Land for sale in Mandalay, Myanmar | ShweProperty.com
Lands For Sale in Mandalay
Land For Sale in Nyaung-U
Nyaung-U ၊ Mandalay
လမ်းမျက်နှာပြင်ရှေ့ပေ200ကျော်၊ တည်းခိုခန်းနှင့်စားသောက်ဆိုင်ပါမစ်ကျပြီး၊ ဟော်တယ်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။…...
လမ်းမျက်နှာပြင်ရှေ့ပေ200ကျော်၊ တည်းခိုခန်းနှင့်စားသောက်ဆိုင်ပါမစ်ကျပြီး၊ ဟော်တယ်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။…
Property ID: S-1192988
Land For Sale in Kyaukse
Kyaukse ၊ Mandalay
မန်တလေးတိုငျး ကြောကျဆညျမွို့ ဇရပျဖွူ ကြေးရှာ တံတားဦးလမျးဟောငျးဘေး တမုတျမွောငျးအနီး(၁၂.၈၃)ဧက ဥယဉျြခွံမွေ စိမျးလဲ့မွို…...
မန်တလေးတိုငျး ကြောကျဆညျမွို့ ဇရပျဖွူ ကြေးရှာ တံတားဦးလမျးဟောငျးဘေး တမုတျမွောငျးအနီး(၁၂.၈၃)ဧက ဥယဉျြခွံမွေ စိမျးလဲ့မွို…
Listed 21 March 2019
Advertiser : Kaung Kaung
ဇရပျဖွူ ကြေးရှာ တံတားဦးလမျးဟောငျးဘေ
Property ID: S-1194110
Asking Price : 5,120 Lakhs
Office no : 095418170
Land For Sale in Patheingyi
Patheingyi ၊ Mandalay
Advertiser : Khin Sandar
Property ID: S-1193527
Asking Price : 250 Lakhs
Office no : 09-43186118, 09-402511049
Land For Sale in Pyinoolwin
Pyinoolwin ၊ Mandalay
တောင်ပေါ် ရှုခင်း ။ အုတ်တံတိုင်းခတ်ထားပြီး ၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်ရှိ၊ အိမ်ဆောက်လို့ရသော မြေကွက်၊...
တောင်ပေါ် ရှုခင်း ။ အုတ်တံတိုင်းခတ်ထားပြီး ၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်ရှိ၊ အိမ်ဆောက်လို့ရသော မြေကွက်၊
Listed 12 January 2019
Thet Swe Aung
Advertiser : Thet Swe Aung
Property ID: S-1186721
Asking Price : 220 Lakhs
Office no : 095193330,09785193330
Property ID: S-1179008
Land For Sale in Meiktila
Meiktila ၊ Mandalay
Property ID: S-1173399
Office no : 09964661284
Land For Sale in Aungmyaythazan
Aungmyaythazan ၊ Mandalay
Property ID: S-1173618
Office no : 09792028679
Land For Sale in Chanayethazan
Chanayethazan ၊ Mandalay
Property ID: S-1178008
Asking Price : 20,000 Lakhs
Office no : 00421177999
Property ID: S-1175471
Asking Price : 600 Lakhs
Office no : 09779792466
Property ID: S-1175230
Asking Price : 950 Lakhs
Office no : 09970803242
Property ID: S-1173181
Asking Price : 32,000 Lakhs
Office no : 095156962
Property ID: S-1170139
Office no : 09792029845
Near Maha An Bwe Kan Htu Thar Pagoda, Me Pone Pyan Ground, Nice, Quiet place and Rich, Decent People around. Beautiful Mountain View. It will get Grant after buildingahouse. Concrete Street. Good Water Source, Good Fencing and Main Entrance Doors already fixed...
Near Maha An Bwe Kan Htu Thar Pagoda, Me Pone Pyan Ground, Nice, Quiet place and Rich, Decent People around. Beautiful Mountain View. It will get Grant after buildingahouse. Concrete Street. Good Water Source, Good Fencing and Main Entrance Doors already fixed
Listed 10 July 2018
Advertiser : kyaw khin
Property ID: S-1169970
Office no : 09795326779
ပြင်​ဦးလွင်​မြို့နယ်​ ၊​အောင်​ချမ်းသာ ​ကျေးရွာအုပ်​စု ၊မြတ်​မင်္ဂလာကွက်​သစ်​ကပ်​လျက်​ သရဖူ​ရေကူးကန်​အနီး…...
ပြင်​ဦးလွင်​မြို့နယ်​ ၊​အောင်​ချမ်းသာ ​ကျေးရွာအုပ်​စု ၊မြတ်​မင်္ဂလာကွက်​သစ်​ကပ်​လျက်​ သရဖူ​ရေကူးကန်​အနီး…
Listed 29 June 2018
Advertiser : Hmue Yadanar Kyaw
​အောင်​ချမ်းသာ ​ကျေးရွာအုပ်​စု ၊မြတ်​မင်္ဂလာကွက်​သစ်​ကပ်​လျက်​ သရဖူ​ရေကူးကန်​အနီး (33mile)
Property ID: S-1169356
Asking Price : 35,000,000 Lakhs
Office no : 09444032393
Property ID: S-1024899
Asking Price : 25,000 Lakhs
Office no : 01-521228, 09-32337888, 09-32337444, 09-250590756
Advertiser : စောသန္တာဦး
Property ID: S-1021407
Office no : 095028613,09790158760
ပြင်ဦးလွင်မြို့။ရပ်ကွက်ကြီး(၁၄) ညောင်နီကျေးရွာအုပ်စု။ရွှေမြင်သာကျေးရွာရှိပေ (40x60) မြေကွက်ရောင်းမည်။ခြံခတ်ပြီး။ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာ…...
ပြင်ဦးလွင်မြို့။ရပ်ကွက်ကြီး(၁၄) ညောင်နီကျေးရွာအုပ်စု။ရွှေမြင်သာကျေးရွာရှိပေ (40x60) မြေကွက်ရောင်းမည်။ခြံခတ်ပြီး။ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာ…
Advertiser : သူသူ
Property ID: S-1144520
Asking Price : 47 Lakhs
Office no : 09253226647
ပြင်ဦးလွင် ရေချမ်းအိုးရွာ ပေ၅၆x၉၀ ငြိမ်အေးချမ်းသာလမ်း အနီး စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်အနား ခြံခတ်ပြီး သိန်3း50 ရွာမြေ…...
ပြင်ဦးလွင် ရေချမ်းအိုးရွာ ပေ၅၆x၉၀ ငြိမ်အေးချမ်းသာလမ်း အနီး စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်အနား ခြံခတ်ပြီး သိန်3း50 ရွာမြေ…
Listed 25 June 2018
Htet Htet Aung Myin
Advertiser : Htet Htet Aung Myin
Property ID: S-1086269
Asking Price : 350 Lakhs
Office no : 095054533
Listed 24 June 2018
Advertiser : U Aung Paing
Property ID: S-1022839
Office no : 09400059268
-6 ဧကခွဲရှိ သည်။ -စိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်း ရှင် များနှင့် အကွတ်စိတ် ရောင်းလိုသူများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ -နေရာကောင်း၊နေရာသန့်၊ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း၊ကွန်ကရစ်လမ်းများခင်းထားပြီး…...
-6 ဧကခွဲရှိ သည်။ -စိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်း ရှင် များနှင့် အကွတ်စိတ် ရောင်းလိုသူများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ -နေရာကောင်း၊နေရာသန့်၊ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း၊ကွန်ကရစ်လမ်းများခင်းထားပြီး…
Listed 23 June 2018
Nay La Min
Advertiser : Nay La Min
ရတနာပုံမြို့ သစ် သုံးတောင်(ရွာမြေ)
Property ID: S-1026425
Mobile : 0947136104 ,0949276999, 09794810587 ,
Office no : 09402551203,
Land for Sale in MandalayLand for Sale in MyanmarProperties for Sale in Mandalay
Land for Sale in AmarapuraLand for Sale in AungmyaythazanLand for Sale in ChanayethazanLand for Sale in ChanmyathaziLand for Sale in KyaukpadaungLand for Sale in KyaukseLand for Sale in LeweLand for Sale in Madaya
Land for Sale in MahaaungmyayLand for Sale in MahlaingLand for Sale in MeiktilaLand for Sale in MogokeLand for Sale in MyingyanLand for Sale in MyitthaLand for Sale in NatogyiLand for Sale in Nyaung-U
Land for Sale in PatheingyiLand for Sale in PyawbweLand for Sale in PyigyitagonLand for Sale in PyinmanaLand for Sale in PyinoolwinLand for Sale in SintgaingLand for Sale in SinguLand for Sale in Tada-U
Land for Sale in TatkonLand for Sale in TaungthaLand for Sale in ThabeikkyinLand for Sale in ThaziLand for Sale in WundwinLand for Sale in YamethinLand for Sale in Mahar Aung Myay
Apartments for Sale in MandalayMini Condos for Sale in Mandalay
Condominiums for Sale in MandalayLanded House for Sale in Mandalay
Serviced Apartment for Sale in MandalayOffice & Retail for Sale in Mandalay
Land for Sale in MandalayIndustrial Zone for Sale in Mandalay